၂၀၂၀ ခုနှစ် အဆင့် : ၇၀ (DB2019 တွင် ၁၅၂)
၂၀၂၀ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်း ရမှတ် : ၈၉.၃ (DB2019 တွင် ၇၇.၃၃)
ဒေသတွင်းပျမ်းမျှ (အရှေ့အာရှပစိဖိတ်) : စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်း အဆင့် ၉၉ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်း ရမှတ် ၈၃.၉
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ဆောင် ချက်များကို ပိုမိုသိရှိရန် - ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
*The ease of doing business score captures the gap between an economy’s performance andameasure of best practice across the entire sample of 41 indicators for 10 Doing Business topics (the labor market regulation indicators are excluded). (Source; World Bank)
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ကြာမြင့်ချိန်၊ ကုန်ကျ စရိတ်နှင့် လီမိတက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု စတင် တည်ထောင်ရန် လိုအပ်သော အနည်းဆုံး မတည်ငွေရင်းပမာဏ
လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် တရားဝင်မှတ်ပုံ တင်ထားပါက အမြတ်အစွန်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ကုန်ထုတ် စွမ်းအားဆိုင်ရာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု များ ပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် တရားမဝင်လုပ်ငန်း ရှင်များသည် အလုပ်သမား အနည်း ငယ်ကိုသာ အလုပ်ခန့်ထားနိုင်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ငွေကြေး ရနိုင်ခွင့်မှာလည်း နည်းပါးပါသည်။
အလုပ်သမားများသည် ဥပဒေအရ အကာအကွယ်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။
တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိုင်မှုနှင့် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးဖွံဖြိုးမှုသည် လည်း ပိုမိုမြင့်မားလာမည် ဖြစ်ပါ သည်။
တရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် အစိုးရအား ပေးဆောင်ရမည့် ဝင်ငွေခွန်နှင့် အလုပ်သမားအခွန် များကို ပေးဆောင်ရန် ရှောင်လွှဲ တတ်ကြသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအား တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်းသည် စွန့်ဦးတီထွင်မှု ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုရာရောက် ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ကုန် ထုတ်စွမ်းအားကိုလည်း မြှင့်တင်ပေး ပါသည်။
၁။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း MyCO account ဖွင့်ပါ (https://www. myco.dica.gov.mm/public/setupaccount.aspx)။ Online Form တွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်း၍ Online မှတဆင့် ငွေပေးသွင်းပါ။ ဖြည့်ရမည့် အချက်အလက်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြ ထားပါသည်-
ကုမ္ပဏီ၏ အကြောင်းအရာ အသေး စိတ်
ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာစာရင်းဖော်ပြရန်။ (ဒါရိုက်တာအသီးသီး၏ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်မိတ္တူကို ပူးတွဲ၍ တင်ပါ။)
ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးဖော်ပြရန်။ (အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူကို ပူးတွဲ၍ တင်ပါ။)
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံတင်ပြရန် (MyCO ပင်မစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထား သော ဖွဲ့စည်းပုံ စံပြပုံစံကို အသုံး မပြုလိုပါက ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်ပိုင် ဖွဲ့စည်းပုံကိုတင်ပြရန် လိုအပ်သည်။)
သတင်းအချက်အလက်များကိုwww.myco.dica.gov.mm နှင့် www.dica.gov.mm တို့ တွင် ထပ်မံရယူနိုင်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှုတစ်ရပ်အား DICA မှ လက်ခံပြီးလျှင်ပြီးခြင်း ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကဒ်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ် ပါသည်။
၂။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသေးစိတ်ကို ဤနေရာ တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ၁ ရက်
၃။ မြို့နယ်အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ရန်။ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသေးစိတ်ကို ဤနေရာ တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ၁ ရက်
၄။ လူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ရန်။ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသေးစိတ်ကို ဤနေရာ တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ၁ ရက်
၂၀၁၄ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းညွှန်းကိန်း အဆင့်သည် ၁၈၉ ဖြစ်ခဲ့သည်။ DB 2020 တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုစတင်ခြင်းညွှန်းကိန်း အဆင့်သည် ၇၀ အထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် DICA သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက် ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများအတွက် အနည်းဆုံးမတည် ငွေရင်းလိုအပ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပိုမို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးအား ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်မှ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်သို့ ထက်ဝက် လျှော့ချခဲ့ပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ အတွက် ဘဏ်စာရင်းတင်ပြရန် လိုအပ်ချက် ကို ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလမှစတင်၍ ပယ်ဖျက် ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးအား ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်မှ ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်သို့ ထက်ဝက် လျှော့ချခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးအား ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်သို့ ထပ်မံ၍ လျှော့ချခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေစတင်အသက် ဝင်ခဲ့ပြီး အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံ တင်စနစ်ဖြစ်သော Myanmar Companies Online (MyCo) ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ရယူရာတွင် Online ဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုသာ ဆောင်ရွက် ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (လူကိုယ်တိုင် ဆောင် ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် ၈ ခုကို ပယ်ဖျက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။) အောက်ပါတို့အား ဆောင်ရွက်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ -
• ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများသည် ရှေ့နေ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရစာရင်းကိုင် ရှေ့မှောက် တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
• ကုမ္ပဏီစည်းနှင့် ကုမ္ပဏီတံဆိပ် ခေါင်း ကပ်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ ။
လျှောက်ထားသူများသည် MyCO ပင်မ စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းပုံနမူနာပုံစံအား အသုံးပြုနိုင်ပါ သည်။ ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံး ပြုလိုပါကလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ ၂၀၁၈ အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူများအား အသိပညာ ပေးရန် ကာလတို ဆောင်ရွက်ဆဲ
DICA၊ IRD၊ အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေး အဖွဲ့ဆိုင်ရာ လိုအပ်သော အချက်အလက် များ ပါဝင်သော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာ Single Submission Form ဖြစ်ပေါ် လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ကာလလတ် စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများအားလုံး အသုံး ပြုနိုင်သည့် Single Company Identification Number ဖန်တီးခြင်း။ ၎င်းကို Unique Business Identifier (UBI) ဟု လူသိများ ပါသည်။ ကာလရှည် စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့် အခွန်
သက်သေခံနံပါတ်တို့ကို တစ်ခုတည်းဖြစ် အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အခွန်၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် Unified Online Platform ကို ဖန်တီးရန်။ ကာလရှည် ဆောင်ရွက်ဆဲ
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် နှစ်စဉ်